Heshiiskii Burburinta Ururka ONLF iyo Xog La,aantii Dadweynaha – Rasaasa News
Sep 16, 2009 Jwxo-shiilada
Waxaan todobaadkii hore qornay sheeko ku saabsan ciwaankan “Kooxdii Jwxo-shiil oo Dhawr Faladh Noqotay” waxaanan hore idiinku balan qaadnay in aanu idiin soo gudbin doono qayb labaad oo ka soo dhex baxday ciwaanka, taas oo ku saabsanayd kobta uu ka bilowday Is gaashaan buuraysiga guul darada dhaxal siiyey Jwxo. Intiina ogg iyo inta aan ogaynba wadamada reer galbeedka waxaa ka jira arimo ay ku dhaqmaan dadka reer galbeedku loona malaynayo in ay sal u tahay ku dhaqan la,aanta diin, dadyowga reer galbeedka hadii uu san jiri lahayn sharci kala wada way is dhamayn lahaayeen, calaashaan xaasidnimada ay isu hayaan darteed.
Arintan xaasidnimadu waxay si khaldan u gashay dhamaan dadka ku nool dalalka reer galbeedka, dadku isuma ogola in uu ruux wanaag laga sheego, waxay ka naxaan hebel shaqo wanaagsan buu helay, hebel waa nin rageed cod kar ah, hebel shahaado sare ayuu haystaa iyo wixii la mid ah.
Hadii aan dib u jaleecno dadkii xubnaha ka noqday ururka ONLF, kuligood waxay ahaayeen dad aan is jeclayn, marka laga reebo kooxda markaas is wadata, xubnaha ugu magac dheeraa ururka ONLF ee horseedka ka ahaa halganka si ay ku dhacdayba kama dhaxaynin kalgacal halgan iyo mid shakhsiyadeed midna, waxaa xusid mudan oo isagu ka gooni ahaa Naxariis Jano Eebe ha siiyee Sheekh Ibraahin Cabdala.
Hadaba, is nacaybka dhexdoodu waxaa uu keenay is reeb reeb, waxaa ay cidina loodin kari wayday oo is muujiyey Dr. Dolal, oo runtii isagu ahaa cod kar Aqoon leh oo uusan nina ka daba hadli karin goobta uu ka hadlo, waxaana uu wax walba oo uu heli karayey galiyey ururka ONLF, sidaasina waxaa uu ku noqday ninkii ugu cadowga badanaa ee ururka dhexdiisa. Halkaas waxaad ka garan kartaa in ayna jirin cid halganka u daacad ahayd marka laga reebo xubno yar, waayo haday daacadi jirto dadka ka shaqeeya ayaa is jeclaan lahaa.
Sida aynu ognahay Maxamed Cumar oo ka soo jeeda dawlad jabtay kuna caan baxay ciidankii Bada Somaliyeed, ayaa waxaa hangool ganto gaaban ku soo qabsaday Dr. Dolal, oo xiligaas ahaa Aabaha ururka ONLF. Maxamed Cumar isaga oo aan wax shaqo ah ka soo qabanin ururka ayaa waxaa muddo gaaban uu Dr. Dolal ugu dhiibay hogaanka ONLF. Waxaan iyagu raali ka ahayn keenida hogaanka ONLF Maxamed Cumar xubno badan oo ka mid ahaa golaha dhexe, Dr. Dolal kolkii uu yimid hogaanka Maxamed Cumar waxaa uu badalay magacyadii uu ururku ku hawl gali jiray isaga oo Maxamed Cumar ugu yeedhay Madaxweyne, runtiina uu xiliyadii hore ka xishoon jiray in loogu yeedho Madaxweyne waloo markii dambe uu noqday “dhargaa waalan dhadhanshaana kaba daran”.
Waxaana muddo dheer ay saabuuntu isugu jirtay Dr. Dolal iyo Maxamed Cumar Cismaan, muddo dhawr sano ah ayuu darsayey hanaanka ay Jwxo u shaqayso wuxuuna ogaaday in ninka meesha isaga keenay uu yahay nin ayna cidi la tartami karin dhinaca halganka, hadii uu arko in uuna dan u ahayn halgankana uu ka qaadi doono jagada. Waxaana Maxamed Cumar uu bilaabay in uu sheeko wadaag la yeesho Maxamed Ismaaciil, waxaana u soo baxday in Maxamed Ismaaciil uusan jeclayn Dr. Dolal, in kasta oo uu u sheegay in Dr. Dolal abaal u galay isaga oo gacan ka gaystay tagidiisii dalka Australia.
Maxamed Cumar kolkii uu maqlay calaacalka Ina Ismaaciil, ayaa waxaa halkaas uga soo baxday fursad uusan filaynin oo ah “leebka iyo qaansada midna ma lihid ee isku kala jabi”, wuxuuna waraysi la dhex orday ururka ninkii labaad ee uu helayna waxaa uu noqday cadaani. Saddexdaas nin ayuu Maxamed Cumar helay in ay yihiin dadka leh awooda ururka ONLF, markaas ayuu dib ula soo baxay arimo uu hore waayo arag ugu ahaa, oo uu ka dhaxlay Naxariis ha helee Maxamed Siyaad Bare.
Xiligaasi waxay ku beegnay badhtamihii sanadkii 2003, kolkaas oo labo sano loogu daray Maxamed Cumar in uu sii hayo xilka. Waxaa si qarsoodi ah isu fahmay Maxamed Ismaaciil, Cadaani iyo Maxamed Cumar, waxayna isla xiligaasba bilaabeen sidii ay bilaawaha u marin lahaayeen, xubnaha ururka ugu awooda badan.
Xiligaas wixii ka dambeeyey, waxaa uu Maxamed Cumar bilaabay in uu diido dalooyinkii uu Dr. Dolal ka qaadan jiray, isaga oo isu badiyey dhinaca Maxamed Ismaciil oo ay heshii burburin ah iyo is gaashaan buuraysi wada galeen, saddexdan nin waxay ahaayeen kuwo ujeedo is khilaafsan leh, balse hal arin ka midaysan; (1) Maxamed Cumar waxaa uu watay hadafkiisa gaarka waxaana uu doonayey in saddexda ninba uu ka takhaluso isaga oo adeegsanay isku dir oo isku dil, dhinaca kale waxaa uu hawl galiyey beeshiisa isaga oo ka dhaadhiciyey in ay kuligood bixiyaan qaaraanka ONLF, soona galaan ururka si ay isaga u difaacaan. (2) Cadaani iyo Ina Ismaaciil waxay lahaayeen labo hadaf Dr. Dolal iyo Maxamed Cumar kala dila, dabadeedna Maxamed Cumar isna la diro si Maxamed Ismaaciil uu u noqdo Gudoomiye, Cadaanina ku xigeen.
Dagaalka waxaa lagu galay Laba mindiyood oo laba afle ah; Cadaani waxaa uu bilaabay in uu kala dilo Dolal iyo beeshiisa isaga oo leh Dr. Dolal baa laftiina ka horjooga ONLF in ay soo gasho, kaligii ayaa doonaya in laga dambeeyo, ma jirto cid kale oo wax garan karta isaga mooyee iyo saqajaanimo badan. Waxaa kale oo uu bilaabay in bulshada xiliyada habeenkii ah ka dhaadhiciyo in Dr. Dolal uu yahay ninka xaaraanta ku haysta ururka oo uusan cid kale waxba u ogolayn……….la soco
Dad Safar ah oo ay Ciidan Beeleedka Jwxo-shiil ay Laayeen
Ciid Wanaagsan Dhamaan Caalamka Islaamkow